Arsenal Oo Aan Weli Xiriir La Sameynin Mikel Arteta Inkastoo Uu Yahay Bartilmaameedkooda 1aad Ee Bedelka Arsene Wenger – GOOL24.NET
Arsenal Oo Aan Weli Xiriir La Sameynin Mikel Arteta Inkastoo Uu Yahay Bartilmaameedkooda 1aad Ee Bedelka Arsene Wenger
Arsenal ayaa weli wax xiriir ah la sameynin caawiyaha tababaraha Manchester City Mikel Arteta oo ay ka dhigteen bartilmaameedkooda koowaad ee macalinkii bedeli lahaa Arsene Wenger sida ay qortay Daily Mirror.
36 jirkaan reer Spain ayaa u soo muuqday ninka ay Gunners dooneyso inuu bedelo Arsene wenger ka dib markii uu labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay uu ka mid ahaa shaqaalaha tababarka ee Pep Guardiola.
Laakiin madaxda Manchester City ayaa weli xiriir ka sugaya Arteta iyo Arsenal si ay u maqlaan qorshahooda.
City ayaan dooneynin inay Arteta u weyso kooxdii uu u soo ciyaaray shantii sannadood ee ugu danbeysay ee waayihiisa ciyaaryahanimo oo ka soo bilowday Barcelona oo ay isla joogeen Guardiola islamarkaana soo mariyay kooxda Rangers, Real Sociedad iyo Everton.
Waa shaqsi si weyn looga jecel yahay Etihad Stadiym isagoo Guardiola ka caawiyay arimo badan mudadii ay wada joogeen kooxda.
Gacantii uu ka geystay in xiddigaha garbaha ka ciyaara ee Raheem Sterling iyo Leroy Sane ay dib u helaan qaab ciyaareedkooda xilli ciyaareedkan ay keentay in City ay si rikoor ah ku qaado horyaalka Premier League.
Laakiin Guardiola ayaa cadeeyay inuusan wadada ka horistaagi doonin Arteta haddii uu go’aansado inuu tababare ka noqdo Arsenal.
Waxaana taas sidoo kale aaminsan boodhka maamula Manchester City kuwaasoo diyaar u ah inay u ogolaadaan Arteta inuu qabto shaqada Emirates haddii uu weydiisto ogolaanshahooda.